पुरानो युग बितेको छ, र नयाँ युग आएको छ। एक वर्षपछि अर्को वर्ष र एक दिन पछि अर्को दिन, परमेश्‍वरले धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँ यस संसारमा आउनुभयो र त्यसपछि प्रस्थान गर्नुभयो। यो चक्र आफै धेरै पुस्ताहरू भएर दोहोरिएको छ। आज, पहिले जस्तै परमेश्‍वरले उहाँले गर्नै पर्ने काम निरन्तर गर्नुहुन्छ, त्यो काम जुन उहाँले पूरा गर्न अझ पनि बाँकी छ, किनकी आजका दिनसम्म उहाँ विश्राममा प्रवेश गर्न बाँकी नै छ। सृष्टिको समयदेखि आजका दिनसम्म, परमेश्‍वरले धेरै काम गर्नु भएको छ। तर के तँलाई आज परमेश्‍वरले पहिलेभन्दा अझ धेरै काम गर्नुहुन्छ, र उहाँको कामको परिमाण पहिलेको भन्दा अझ धेरै छ भन्ने थाहा थियो? त्यसै कारणले म भन्छु कि परमेश्‍वरले मानिसहरू माझमा महान् कुरा गर्नुभएको छ। परमेश्‍वरका सबै काम अति नै महत्वपूर्ण छन् चाहे त्यो मानिसको लागि होस् वा परमेश्‍वरको लागि होस्, किनकि उहाँको कामको हरेक बिषय मानिससँग सम्बन्धित छ।
परमेश्‍वरको कामलाई न त देख्न सकिन्छ न त लिन सकिन्छ—संसारले साह्रै थोरै मात्र देखेको छ—कसरी त्यो महान् कुनै कुरा हुन सक्छ? कस्तो प्रकारको चीजलाई मात्र महान् मानिन सकिन्थ्यो? निश्चय नै, कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन कि परमेश्‍वर जे काम गर्नुहुन्छ, त्यो महान् मान्न सकिन्छ, तर म किन परमेश्‍वरले यो दिनमा गर्नुहुने कामको बारेमा भन्छु। जब म भन्छु कि परमेश्‍वरले महान् कुरा गर्नुभएको छ, यसले निःसन्देह मानिसले बुझ्नै बाँकी धेरै रहस्यहरूलाई समावेश गर्छ। तिनीहरूको बारेमा अब कुरा गरौं।